Bahrain: Atsaharo amin’izay! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2010 7:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, اردو, Deutsch, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Miaraka amin'ny volana masin'ny Ramadan silamo (volana fifadian-kanina) izay mihamanakaiky haingana dia haingana, ilay mpitoraka blaogy Bahraini Tawfeeq Al Rayash dia manenjika bitro roa. Mifady hanina mandritra ny telo volana izy ary miala amin'ny fifohana sigara taorian'ny antso fampahatsiarovan-tena avy amin'ny zanany vavy.
Manambara ilay mpitoraka blaogy:
Nanapa-kevitra aho fa hifady hanina mandritra ny telo volana misesy - Rajab, Sha'ban ary Ramadan. Ary ity fanambaràna ity dia tsy sazy na fanonerana ny heloka vita!! Faniriako efa hatry ny taona maro izao nefa tsy namela ahy nanao izany ny zava-nisy, sakana ho an'izany ireo fivezivezeko. Na izany aza, amin'ny fotoana mafana sy mando indrindra ny fotoana ifadiako hanina. Hanome faharetana ahy anie Allah! Miaraka amin'ity fanapahan-kevitra ity, naka fepetra lehibe iray amin'ny fiainako aho dia ny hanatsaharako ny fifohana sigara mandrakizay. Ho an'ireo izay tsy mahalala ahy, mpifoka sigara mavitrika aho (sigara 20 isan'andro) nandritra ireo 18 taona farany teo ary midika izany fa mijaly ny avokavoko
Maro ireo Silamo mpanota no mifady hanina mandritra ny telo volana, anatin'izany ny Ramadan, ho endrika ivelany amin'ny fivavahana.
I Al Rayash koa dia mamolavola ny fanapaha-kevitra hanatsaharana izany ary milaza hoe: